आयरल्याण्डविरुद्ध इंग्ल्याण्ड ८५ रनमै अल आउट ! - Everest Dainik - News from Nepal
आयरल्याण्डविरुद्ध इंग्ल्याण्ड ८५ रनमै अल आउट !
काठमाडौं, साउन ८ । केही दिनअघि मात्र आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको इंग्ल्याण्डले आयरल्याण्डविरुद्ध टेस्ट खेलको पहिलो पारीमा ८५ रन मात्र बनाएको छ । लड्स क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको इंग्ल्याण्डले २३.४ ओभरमा अल आउट हुँदै ८५ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
ट्याग्स: आयरल्याण्ड भर्सेस आयरल्याण्ड, टेस्ट क्रिकेट